यस्तो पनि लकडाउन- जहाँ प्रहरी मूकदर्शक छन्, मानिसहरू हाट-बजारमा व्यस्त ! (फोटोफिचर):: Mero Desh
यस्तो पनि लकडाउन- जहाँ प्रहरी मूकदर्शक छन्, मानिसहरू हाट-बजारमा व्यस्त ! (फोटोफिचर)
Published on: ४ बैशाख २०७७, बिहीबार ०५:५०
बिहीबार बिहानै जनककपुरमा देखिएका दृश्यहरुले जोकोहीलाई चिन्तित बनाएको छ । मुलुक पूरै लकडाउनमा रहेको बेला प्रदेश- २ को केन्द्र जनकपुर सदरमुकाम जनकपुर बजारमा भने लकडाउनकाे धज्जी उडाउँदै सर्वसाधारणहरु बिहानैदेखि सड़कमा देखिएका छन् । स्थानीय
प्रशाशन र प्रहरीको अगाडि नै हाट-बजार सञ्चालन गरिएकाे छ भने सड़कमा मानिसहरूकाे बाक्लै चहलपहन देखिएको छ । याे भीड़ले जोकोहीलाई सचेत मानिसलाइ भने चिन्तित बनाएकाे छ, काेराेना संक्रमण फैलिनसक्ने डरले ।प्रदेश- २ मा कोरोना संक्रमणकाे उच्च जोखिम रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यसै बखत जनकपुरधामको सड़कमा देखिएको यो दृश्यले भने थुप्रै प्रश्नहरु उठाएको छ ।
किन भयो यो अवस्थाको सिर्जना ?
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाले मंगलबार गरेको निर्णयपछि ‘लकडाउन’ उल्लंघन बढेको हाे । मंगलबारसम्म पूर्ण रुपले ‘लकडाउन’ पालना भइरहेको जनकपुरमा समितिको निर्णयपछि बुधबारदेखि मानिसहरूकाे चहलपहल बढेको थियाे ।
मंगलबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि, दुध, खानेपानी, तरकारीलगायतका अत्यावश्क उपभोग्य वस्तु बिहान ५ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म खरिदबिक्री गर्न सकिने निर्णय गरेको थियाे । यस्ता सामग्री खरिद-बिक्री गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ तर सर्वसाधारणले त्याे नबुझेका हुन् वा पालना नगरेका ?विपद् व्यवस्थापन समितिले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरु मात्र खरिद-बिक्री गर्न सकिने निर्णय गरेको छ . तर यसबाहेकका अन्य पसल पनि खुलेका छन् । समितिको यस्तो निर्णय आएसँगै पसलमा भीडभाड बढेको छ भने सवारीसाधन पनि गुड्न थालेका छन् ।
समितिको निर्णयको यहाँका कतिपय स्थानीयले विरोधसमेत गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको खतरा बढिरहेको बेला ‘लकडाउन’ लाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा यस्तो निर्णय गरेर जोखिम बढाउने काम भएको युवा अभियन्ता सुशील कर्णले बताए ।विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि कामै नभए पनि सामान खरिद गर्ने वहानामा मानिसहरु सडकमा हिंड्न थालेको कर्णले बताए । कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने काम प्राथमिकतामा हुनुपर्नेमा विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयले ‘लकडाउन’ को धज्जी उडाएको उनको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले वहाना बनाएर सडकमा हिँड्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे ।